iOS 11.2 inogadzirisa iyo bug yeiyo Calculator yeshanduro dzakapfuura | IPhone nhau
Kupesana nematambudziko ese, vakomana veCupertino vakaburitsa yekutanga beta yeIOS 11.2 yevanogadzira, apo vhezheni yekupedzisira yeIOS 11.1 isati yasvika kune veruzhinji. Zvingangodaro, ichaita saizvozvo pazuva rimwe chete, Mbudzi 3, zuva iro Apple ichatanga kuendesa yekutanga iPhone X kune wese munhu. avo vashandisi vakaita rombo rakaringana kuzvichengetera mumaminetsi ekutanga. Iyi beta yekutanga yeIOS 11.2 pakupedzisira inogadzirisa dambudziko mu Calculator, dambudziko ravepo kubvira pakaburitswa vhezheni yekupedzisira yeIOS 11 yakaburitswa munaGunyana mushure memwedzi yakati wandei yekuyedzwa.
Isu tinowana dambudziko necustomer patinoishandisa nekukurumidza, izvo zvinoita kuti mamwe mabhatani arege kufuratirwa nehurongwa. Iwe unogona kuzviedza iwe nekukurumidza kudzvanya 1 + 2 + 3 nekudzvanya chiratidzo chakaenzana. Mifananidzo yekudonha inokonzera iyo mhedzisiro mhedzisiro kuve makumi maviri nematanhatu panzvimbo pe24, kubvira pakudzvanya + chiratidzo mushure mechipiri, sisitimu yacho haichizive uye haiite iyo inoenderana neyekuvhenekesa. Kana iwe uchigara uchishandisa iyo Calculator yeIOS, zvirokwazvo pane kanopfuura kamwe chiitiko iwe waifanirwa kuita oparesheni zvakare, mune imwe nzira yekuzorora, nekuti mhedzisiro yakawanikwa haina musoro.
Parizvino, hutsva hukuru hwatinowana mukuburitswa kweiyo iOS 11.2 beta 1, inogadzirisa dambudziko iri necustomer. Chimwe chinhu chitsva chatinowana mune iyi vhezheni chinowanikwa mune iwo mapikicha, kubvira c mari yakasarudzika yakabva kuruoko rweiyo iPhone 8 Plus, iPhone 8 uye iPhone X ichasvikawo kune mamwe ese majaira apo Apple inoburitsa vhezheni yekupedzisira yeIOS 11.2. Panyaya yematambudziko ebhatiri ayo vashandisi vazhinji vari kuramba vachitambura, isu hatifanire kumirira iOS 11.2, nekuti parizvino beta yazvino yeIOS 11.1 yakagadzirisa zvakanyanya dambudziko iri rakatsamwisa vazhinji vashandisi veApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11.2 inogadzirisa iyo bug ye Calculator yeshanduro dzakapfuura